MILA VONJY AMIN’NY FITSABOANA ANY INDE : Zaza vao valo volana tratran’ny areti-maso
Very fanahy mbola velona ny fianakavian’i Tsangaharison Kelly Dano amin’izao fotoana izao. 7 mars 2019
Very fanahy mbola velona ny fianakavian’i Tsangaharison Kelly Dano amin’izao fotoana izao. Ity farany izay zazavavikely vao 9 volana monja nefa dia efa tratran’ny areti-maso mety hitarika fahajambana mandra-maty. Ilay aretina “ rétinopathie du prématuré” no mahavoa azy. Monina ao Toamasina ny ray aman-dreniny. Efa natao ny fitsaboana rehetra teto Madagasikara saingy tsy mety sitrana, ka ilana fitsaboana any ivelany. Milaza ny mpitsabo azy fa tsy vita eto Madagasikara intsony ny fitsaboana fa tsy maintsy ilàna fandehanana any Inde.
Tsy manana ny hoenti-manana amin’izany anefa ny fianakavian’i Tsangaharison Kelly Dano, ka izao manao antso tolo-tanana amin’ny malala-tanana sy ny fitondram-panjakana foibe izao.
Manao antso avo amin’ny fikambanana Fitia tarihin-dRamatoa Mialy Rajoelina ihany koa ny ray aman-drenin’i Kelly mba hijery an’ity zaza vao 9 volana manana olana ara-pahasalamana goavana ity. Raha tsy mahazo fitsaboana ao anatin’ny fotoana fohy, dia ny ho aviny mihitsy no ho potika sahady satria hiafara amin’ny fahajambana entina mandra-maty.
Vonjy aina no atao, ka ho an’izay te-hanampy azy, dia ao amin’ny Lot 19 Cité Poste Salamazay Toamasina no misy an’i Tsangaharison Kelly Dano na koa miantso mivantana ny ray aman-dreniny amin’ny laharana 034 06 690 43.